Boosaaso:-Ciidanka Amniga Puntland PSF oo ay weheliyaan ciidamada kale ee difaaca dowladda Puntland ayaa maanta 04 November, 2017 waxaa ay howl gal ka fuliyeen si wada jir ah Buuraha Calmadow gaar ahaan degaanka Harweyn ee Buuraha Cal Madow.
Sarkaalka u hadlay Ciidanka Puntland ayaa sheegay in howl galka ay ka fuliyeen deegaanka Harweyn ay guul ka gaareen ayna burburiyeen saldhig ay cidanka Al-shabaab ku lahayeen deegaanka waxaan uu sheegay in howl galku uu sii soco doono.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa Ciidanka Amniga Puntland (PSF) iyo Ciidanka badda Puntland ay howl gal ka fuliyeen si wada jir ah Buuraha Calmadow gaar ahan deegaanka Dolqooxle oo hoostaga tuulada Afurur ee gobolka Sanaag iyagoo sheegay in howl galkaas ay ku soo qabteen 5 xubnood oo ka tirsan ururka Al-shabaab.
Ma ah markii ugu horaysay oo dagaalo fool ka fool ah ay ku dhexmaraan deegaano ka tirsan Buuraha Calmodow ciidanka Puntland iyo ururka Al-shabaab waxaa ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dhinac Al-shabaab ee ku sugan Buuraha Calmadow ayaa weeraro gaadmo ah oo dhowr ah ku qaaday fariisamo ay leeyihin ciidanka Daraawiishta Puntland ay ku geysteen khasaaro kale duwan.